Iyadoo Adobe ka dib Raadka, waxaad samayn kartaa sawiro mooshinka la dhalaalayay iyo saamaynta muuqaal ah fanaaniinta cusub adiga oo isticmaaleya isticmaale-abuur iyo mala-awaalkooda. Laakiin sida ay u aan waayo-aragnimo u gaar ah, waa gabi ahaanba ma fududa si aad u bilowdo. Waxaa jira qalooca yaacday waxbarashada idinka soo hor jeedda. Sidaas darteed ma jiraa a barnaamijka sida dib Dhibaatooyinka kuu ogolaada in aad si kor video la saamaynta ku kalifay si fudud oo dhaqso?
Ka dib markii Raadka waa mooshin digital compositing iyo tafatirka software ugu gaar ah oo ku saabsan suuqa. Waa ay adag tahay, haddii aan macquul aheyn, si aad u hesho Raadka Adobe u dhigma midkood u Windows ama Mac (Mountain libaax ka mid ah). Si kastaba ha ahaatee, boggan ka mid noqon doona dhowr Adobe ka dib Dhibaatooyinka kale oo qayb ahaan la mid ah ka dib Raadka. Dooro kale ka dib Saamaynta adiga kugu haboon iyo shuruudaha aad u.
Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) - Codso Raadka ee One Click
Wondershare Video Editor siinayaa in ka badan 50 saamaynta muuqaal ah in aad isla markiiba video heerka ku xiga keeno. Waxa kale oo ay ku jiraan dhamaan qalabka tafatirka video caadiga ah aad u baahan tahay. Sidaa daraadeed, waxa aad awoodi kartaa in la abuuro filimada guriga Hollywood-sida la kala guurka, horyaal, saamaynta ka qaabab kala duwan ee videos, audio iyo sawiro. Astaamaha sareeya sida Picture-in-Picture, si degdeg ah / mooshin gaabis ah, isbedel cod, video / duubista waa fududahay in la isticmaalo. Waxa muhiimka ah waa in la wadaago asxaabta iyo qoyska ayaa ah nin aan ka hawl yar. Waxaad la Upload fududahay in YouTube, Facebook, iwm Save si presets qaybiyay for loo maqli karo ee qalabka la qaadi karo sida iPhone, iPad, iPod, huriyaan dab, iwm wadaagi karaan videos ama gubi DVD inay si fiican u badbaadin. Waxa ay noqon kartaa kale in ay dib Dhibaatooyinka in dhimeysa fudayd ee isticmaalka iyo awood.
Apple Motion - A Like Barnaamijka Ka dib Raadka u Mac (Mountain Libaaxa, Libaaxa taageeray)
Apple ee Motion sidoo kale waa naqshadeynta mooshin iyo compositing codsi la mid ah ka dib Raadka, taas oo kuu ogolaanayaa inaad la abuuro animations dhalaalayay kuu gaar ah ee 2D ama 3D meel, ama astaysto iminka horyaal, kala guurka, iyo saamaynta u Final Cut Pro, codsiga tafatirka video ah sidoo kale waxa ay Apple . Kala duwan ka dib markii Raadka, Motion ku siinayaa jawaab-celin-waqtiga dhabta ah. Ma jirto baahi loo qabo in la moodo in ay u arkaan shaqadaada.
Wax - Alternative Free in dib Dhibaatooyinka in Windows
Waxaad kaloo isticmaali kartaa Wax sida miisaanka yar ka dib Dhibaatooyinka kale ah Windows oo keliya, iyo gebi ahaanba bilaash ah. Iyadoo Wax, aad samayn karto compositing iyo saamaynta gaar ah sida ka dib Raadka. Tani barnaamijka kale oo lacag la'aan ah si ay dib Dhibaatooyinka kartaa shaqo codsiga standalone ama sida plugin ah software sida Sony Vegas. By isticmaalaya plugin adabtarada - waxaad isticmaali kartaa xitaa DirectX plugins / Windows presets Kan sameeyey Movie / filtarrada VirtualDub sida Wax plugins. Inta badan kaararka graphic, waxay bixisaa qaar ka mid ah waqti dhab ah ama saameynta-waqtiga dhabta ah dhow.
Eyeon qeybo - Ka dib markii Raadka Alternative for Windows iyo Linux
Fusion waa software compositing video xitaa horumarsan badan ka dib Dhibaatooyinka loogu talagalay by Eyeon Software Inc. Waxaa si weyn loo adeegsaday in la abuuro saamaynta muuqaalka iyo compositing digital filim, HD iyo commercials. Tusaale ahaan, Avatar, Sin City, Lost, Terminator Salvation, iwm ayaa loo isticmaalaa in la sameeyo qeybo ka post-soo-saarka. Fusion ordi karaan in Windows iyo Linux (isticmaalaya Khamri ah kartoo.)
Days - Barnaamijka kale oo la mid ah si lacag la'aan ah ka dib Raadka
Days waa software FREE oo u furan-il in jeclaan dib Dhibaatooyinka in loo isticmaali karaa in la abuuro naqshadeynta dhaceen, saamaynta muuqaal ah, codsiyada 3D falgal ama kulan video. Sifooyinka muhiimka ah days waxaa ka mid ah Tusaale 3D, video tafatirka, mayrida UV, texturing, dheecaanka iyo matalaada qiiq, istuuray walxaha, dhiirogelin, iyo compositing.
> Resource > Video > Easy in la isticmaalo ka dib Dhibaatooyinka Alternative for Windows / Mac